Findram-bola arahin'antoka trano: inona izany | TeraNews.net
Ny findramam-bola arahin'antoka trano: inona izany
mpanoratra Vaovao momba an'i Tera Navoaka tamin'ny 03.09.2019
Ny trosa arahin'antoka trano dia ny fahazoana trosa vola avy amin'ny olona na fikambanana ara-dalàna. Ny zavatra iray azo antoka dia ny fananana misy vidiny manokana eo amin'ny tsena. Ny trosa toy izany matetika dia misafotofoto amin'ny trosa areti-bola, izay diso mihitsy aza. Rehefa dinihina tokoa, ny foto-kevitry ny antoka dia tsy ny foto-kevitra amin'ny fividianana.
Ny orinasa tsirairay izay manome fampindramam-bola azo avy amin'ny trano fonenana dia manana ny fitsipiny manokana. Ohatra, ny ankamaroan'ny banky dia mitaky fanamarinana momba ny vola miditra. Manolotra vola ho an'ny tanjona rehetra ny MFI MiG Credit Astana, araka ny tetika tsotra, tsy misy taratasy. Ny trosa amin'ny fiarovana ny trano any Almaty - Vahaolana tsara amin'ny fampivoarana ny orinasanao manokana.
Ny trosa arahin'antoka trano: tombony
fahombiazana. Ny olana amin'ireo banky rehetra, tsy an-kanavaka, dia ny fankatoavana maharitra maharitra amin'ny trosa arahin'antoka trano. Ny fanombanana ny fananana, ny fikarohana ny mpanjifa amin'ny tranokalan'ny fikambanana hafa, ny fankatoavana ny vola miaraka amin'ny lehiben'ny birao, ny sonia multilateral amin'ny fifanarahana, ny fiantohana. Ny orinasa MiG Credit Astana dia mahafantatra ny vidin'ny fotoana.
Mba hahazoana fampindramam-bola dia mila fonosana antontan-taratasy ambany indrindra:
Olon-olona - ireto dia antontan-taratasy momba ny mombamomba azy ary manamarina ny zo amin'ny antoka, ary koa ny taratasy fanamarinana ary ny taratasy fisoratana anarana ho an'ny trano fonenana;
Enti-manara-dalàna - ity dia dika mitovy amin'ny antontan-taratasim-pananana sy ny zon'ny fananana, ary koa ny fahazoan-dàlana ny fitantanan'ny fitantanam-bola sy ny taratasy fisoratana anarana ho an'ny trano.
Sokajy ara-drariny. Ireo banky dia maniry ny hanamaivana ny hasarobidin'ny trano fonenana nafindra. Eny tokoa, na dia misy olana aza, dia mbola hihinana tombony hatrany ny banky. MiG Credit Astana dia tsy miditra am-pitaka toy izany - tombanana amin'ny vidin'ny tsena ny vidiny. Ankoatra izany, ny orinasa dia manana serivisy - fitsidihana manokana maimaim-poana amin'ny fanombohana mialoha ny fananana fananana zanatany.
Olana manokana. Ankoatry ny fanamaivanana ny lanjan'ny fananana ara-tahiry, ny banky dia mihetsika amin'ny karazan-javatra manokana. Ny vola dia an-tsitrapo no omena afa-tsy ny fiarovana ny trano mipetraka amin'ny trano avo. Ny banky dia manandrana manome ny taha kely indrindra ho an'ny trano hafa. MiG Credit Astana tsy manaraka ny toerana tena izy. Trano tsy miankina, tany ifotony, zavatra tsy nonenana - tsy misy famerana ny mpampindram-bola. Raha maniry dia hahazo trosa mihoatra ny 50-60% ny mpanjifan'ny fananana trano ivon-toeram-pihariana.
Ny trosa arahin'antoka trano: tsy fatiantoka
Misy foana ny risika, indrindra ireo tranga ireo rehefa raisina ny vola ho amin'ny fampandrosoana amin'ny sehatry ny orinasa hatramin'ny voalohany. Fa na dia amin'ireto tranga ireto aza, ny orinasam-piaraha-miasa MiG Credit Astana dia vonona hionona. Fitaovana am-polony izay hanampy ny mpampindram-bola hamerina ny trosa arovan'ny tranobe amin'ny lafiny ankasitrahana.
Ireo banky ireo dia liana amin'ny tsy faharetan'ny mpampindram-bola. MCO MiG Credit Astana dia miasa amin'ny ho avy. Rehefa avy nindramina amin'ny resaka tsara dia azo ampiharina indray ny mpanjifa na hanoro ny orinasa amin'ny namana sy olom-pantatra. Ity no fomba anaovana ny asa aman-draharaha eran'izao tontolo izao.
Ny ady ara-barotra amerikanina sy Shina dia tsy nihemotra intsony
Ny hetra nomerika mankasitraka an'i Apple sy i Google - hevitra
Lalao Olaimpika - faran'ny vanim-potoana fakantsary nomerika
Boaty TV ZIDOO Z10: foibe multimedia
Nimses, Bitcoin, Tesla: piramida ara-bola